Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kaga digay Ciidamada Maamulkaa... | Universal Somali TV
Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kaga digay Ciidamada Maamulkaasi inay dhibaateeyaan dadka shacabka
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa digniin adag u diray Ciidamada Maamulkaasi ee tacadiyada u gaysta dadka shacabka ah ee ku nool Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
Madaxweyne C/casiis Lafta gareen, ayaa sheegay in aanan loo dulqaadan karin tacadiyada Ciidamada ay gaysanayaan, waxaana Saraakiisha uu amray in si adag loola xisaabtamo Ciidamada Maamulka ee hubka dadka ku dhibaateynaya.
“Ninkii Askariga ahaa ee la rabay xuquuqda shacabka inuu illaaliyo inuu dilo wax aan aqbaleyno ma’ahan ninkii nin dila waa la tooganayaa ma ogolaaneyno in askari dambe uu qof shacab ah dilo, waxa Askariga laga doonaayo inuu u taagnaado ilaalinta shacabka.” Ayuu yiri Madaxweyne Lafta Gareen.
“Waxaan aad uga xanaaqay oo uga xumaaday nin Askari ah ayaa wuxuu dilay nin darawal ah wuxuuna u dilay lacag dhan Shan kun Shilin Somali ah, dadkaasi iyaga ah inay Bulshada ku sii dhex jiraan ma aqbaleyno, gacan adag ayaana ku qabaneynaa.” Ayuu yiri Madaxweyne Lafta gareen.
Dabaqaayadii Bishii Ramadaan, ayaa askari ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed wuxuu Magaalada Baydhabo ku dilay nin darawal ahaa, kadib markii uu u toogtay lacag dhan Shan kun oo Shilin Somali ah oo uu ka rabay.
Kan-xigaQorshaha amniga caasimadda Muqdisho o...
Kan-hore58 Maxbuus oo laga wareejiyay Xabsiga...
47,891,924 unique visits